Njengoba lisetshenziswe amabhilikosi Ukudla
amabhilikosi omisiwe abacebile izakhi kanye ukulandelela izakhi ukubunjwa yayo iqukethe potassium, i-calcium, magnesium, namavithamini. Nanguya enempilo, kunomphumela ezuzisayo phezu isimo psycho-ngokomzwelo, aqede ukucindezeleka futhi kukusiza ukuba ulahlekelwe isisindo.
Labo abantu okungenani kanye empilweni yakhe wahlala ekudleni, uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukuba bangayeki amaswidi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene abasebenzi ulwazi, lapho kuyadingeka ukugxila ngangokunokwenzeka, futhi lokhu kudinga ngokudla okunomsoco ikakhulukazi ubuchopho. Yingakho abantu abaningi abakhuluphele, ukudla ibha ushokoledi sinombono ukushintsha ingqondo yakho ngosuku olwandulela yokubika, njll Ukuze uxazulule le nkinga, kukhona okukhulu okunye - amabhilikosi ukudla uyasondla ubuchopho, has imiphumela ezuzisayo on isimiso sezinzwa futhi kusenza sikwazi ukunciphisa umzimba.
Uma ngesikhathi Ukudla Onqobayo indlala oweqile, izazi zokudla ukweluleka kancane ukuhlafuna izithelo ezomisiwe amabhilikosi, amanzi amaningi. Nasibuka lelizinga lelisetulu okuqukethwe kwama-kilojoule izithelo ezomisiwe, abantu abaningi bezibuza ukuthi ingasetshenziswa kwesisindo amabhilikosi. Yiqiniso, kuba okunomsoco kakhulu futhi ngaleyo ndlela ikhalori iqukethe esiningi carbohydrate, ngokuba umthombo oyigugu wamandla. Yiba amabhilikosi uqinisekile ngokushesha ematisa umzimba, ngakho kakhulu ngeke bathola nasikhathi sokudla. Uma siqhathanisa ngayo ukudla okunoshukela kubonakala ikhalori aphansi kakhulu futhi izakhiwo ezuzisayo inkulu ngokuphindwe kaningi kunemali ushokoledi noma uswidi.
Abaningi bethu silwa isisindo okweqile iminyaka, kodwa eqinisweni cishe wonke umuntu uyazi kahle ukuthi ukwenza ukunciphisa umzimba. Okokuqala kubalulekile ukudla okuningi esingaphansi esasikwenza. Kuyadingeka ukunciphisa ukusetshenziswa amaswidi, njengoba ngaphandle carbohydrate elula futhi ukudla ushukela emzimbeni enjalo alenzi lutho. carbohydrate okweqile kuthiwa kugaywe ngokushesha futhi bahlale ezinhlangothini, glucose inika umthwalo omkhulu phezu amanyikwe, futhi udle ihora ke kungafiseleka futhi. Izithelo omisiwe nawo amnandi kakhulu, kodwa ushukela zemvelo, okuyinto ngokulinganisela wusizo umzimba. amabhilikosi omisiwe eliphumelelayo kwesisindo ngoba umzimba engazizwa i Ukushoda okukhulu kwezakhi, okusho ukuthi cwilisa ekudleni kuze kube sekupheleni.
Nge amabhilikosi omisiwe ungaqala usuku ngalunye ngokuhlola itekisi kwasekuseni enempilo. Akuwona wonke umuntu uthanda ukuba iphalishi ekuseni, kodwa kuhle ke ukwengeza oqoshiwe amabhilikosi kancane omisiwe futhi iconsi uju, njengoba ibhulakufesi uguqulwe umkhiqizo oluyigugu futhi esihlwabusayo. Nge ukuqala kosuku amandla amasha kuyoba okwanele kuze kuhlwe. Ngaphezu kwalokho, ukudla kwasemini kanye dinner ukuthi awuhambi udla kakhulu ngoba uhlale uzizwa ulambile emva ukudla kwasekuseni okunomsoco ocebile esiyitholayo akunjalo oyingozi.
amabhilikosi omisiwe anconywe kwesisindo njengoba umkhiqizo esiyinhloko impumuzo kosuku. Cwilisa ngobusuku obubodwa 100 - 200 amagremu yamanzi abilisiwe. Ekuseni kufanele kube odakiwe, amabhilikosi ahlukaniselwe izingxenye eziyisithupha alinganayo futhi adle emini. Kubalulekile ukugcina imodi ukuphuza ngosuku, inani lemali elincane amanzi - 2.5 amalitha.
A anhlobonhlobo imikhiqizo esitolo emashalofini okuheha abathengi, umphumela waba ukwanda mass amafutha, okunikeza asemrarweni nezinkinga zempilo. Ukuze ususe sokuchuma okunjalo, kwanele ukuba wazi ukuthi akuyona ukunciphisa umzimba. Uhlu kuhlanganisa yonke imikhiqizo confectionery, ukudla olungiselelwe, ayi, okunamafutha kanye nokudla okuthosiwe, okunosawoti neziphuzo ezinoshukela. At inhliziyo ukudla nsuku zonke kumele isekelwe ukudla amaprotheni, amaningi nemifino, inyama engenamafutha. Kodwa elimnandi, vuma izithelo ambalwa amabhilikosi omisiwe, awukudla sweet futhi unempilo, khona-ke ngokuqinisekile isisindo esengeziwe akusho ukwesabisa kwakho
Ukudla 'ubhamubhamu neqanda' - Goodbye ikhalori
Pearl ibhali. izakhiwo ezisebenzisekayo isicelo ekuphekeni
Yini engingayenza adle emva ushevu kungekho ukulinyazwa emzimbeni
15 amahhotela ezibizayo kakhulu emhlabeni.
Indlela ukususa isikhunta ezindongeni efulethini phakade
FM-Transmitter - Ukuthuthukiswa okungabizi semoto stereos